NewInvestCoin စျေး - အွန်လိုင်း NIC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NewInvestCoin (NIC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NewInvestCoin (NIC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NewInvestCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NewInvestCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NewInvestCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NewInvestCoinNIC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00187NewInvestCoinNIC သို့ ယူရိုEUR€0.00158NewInvestCoinNIC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00143NewInvestCoinNIC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00171NewInvestCoinNIC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0168NewInvestCoinNIC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0118NewInvestCoinNIC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0415NewInvestCoinNIC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00697NewInvestCoinNIC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00249NewInvestCoinNIC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0026NewInvestCoinNIC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.042NewInvestCoinNIC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0145NewInvestCoinNIC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.01NewInvestCoinNIC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.14NewInvestCoinNIC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.316NewInvestCoinNIC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00257NewInvestCoinNIC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00281NewInvestCoinNIC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0584NewInvestCoinNIC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.013NewInvestCoinNIC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.198NewInvestCoinNIC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2.22NewInvestCoinNIC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.728NewInvestCoinNIC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.138NewInvestCoinNIC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.052
NewInvestCoinNIC သို့ BitcoinBTC0.0000002 NewInvestCoinNIC သို့ EthereumETH0.000005 NewInvestCoinNIC သို့ LitecoinLTC0.00003 NewInvestCoinNIC သို့ DigitalCashDASH0.00002 NewInvestCoinNIC သို့ MoneroXMR0.00002 NewInvestCoinNIC သို့ NxtNXT0.134 NewInvestCoinNIC သို့ Ethereum ClassicETC0.00026 NewInvestCoinNIC သို့ DogecoinDOGE0.527 NewInvestCoinNIC သို့ ZCashZEC0.00002 NewInvestCoinNIC သို့ BitsharesBTS0.0719 NewInvestCoinNIC သို့ DigiByteDGB0.0693 NewInvestCoinNIC သို့ RippleXRP0.00604 NewInvestCoinNIC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00006 NewInvestCoinNIC သို့ PeerCoinPPC0.00664 NewInvestCoinNIC သို့ CraigsCoinCRAIG0.832 NewInvestCoinNIC သို့ BitstakeXBS0.0779 NewInvestCoinNIC သို့ PayCoinXPY0.0319 NewInvestCoinNIC သို့ ProsperCoinPRC0.229 NewInvestCoinNIC သို့ YbCoinYBC0.000001 NewInvestCoinNIC သို့ DarkKushDANK0.586 NewInvestCoinNIC သို့ GiveCoinGIVE3.95 NewInvestCoinNIC သို့ KoboCoinKOBO0.407 NewInvestCoinNIC သို့ DarkTokenDT0.00173 NewInvestCoinNIC သို့ CETUS CoinCETI5.27